Faahfaahinta Mashruuca waxaa lagu wadaagay kulanka Gudbinta Mersin Metro | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYCoast Mediterranean33 MersinFaahfaahinta Mashruuca waxaa lagu wadaagay kulanka Gudbinta Mersin Metro
23 / 01 / 2020 33 Mersin, Coast Mediterranean, tareenka, GUUD, KENTİÇİ Systems Rail, Headline, Metro, TURKEY, VIDEO
Faahfaahinta mashruucan waxaa lagu wadaagay kulanka Mersin Metro
Duqa Magaalada Mersin ee Magaalada Vahap Seçer wuxuu la wadaagay faahfaahinta mashruuca dadweynaha "Shirka Macluumaadka Nidaamka Tareenka ee Mersin". Madaxweyne Seçer wuxuu caddeeyey in hab debecsan oo isugu jira dhisme iyo maalgelin lagu tijaabin doono markii ugu horreysay Mersin wuxuuna yidhi, "Waxaan ku dhufan doonnaa qodiskii ugu horreeyay sannadka 2020". Isagoo cadeeyay inay shaqadan siin doonaan shirkado aad loo ixtiraamo, Madaxweyne Seçer wuxuu yidhi, “Waxaan qiimo ugu kordhin doonaa Mersin mashruucan. Currently, ma aha oo kaliya in Turkey, dunida Mersin hadlayaa, "ayuu yiri. Madaxweyne Seçer wuxuu sheegay in ugu yaraan 50 boqolkiiba qiimaha qandaraaska uu ku nagaan doono suuqa Mersin, "8 kun oo qof, si toos ah ama si aan toos ahaynba, waxay fursad u heli doonaan inay ka faa'iideystaan."
Kaqeybgal deg deg ah kulanka hordhaca
Dawlada Hoose ee Magaaladda Mersin waxaa loo dejiyey wajigii koowaad ee mashruuca nidaamka tareenka 27ka Diseembar 2019. Madaxweyne Vahap Seçer iyo la taliyayaasha shirkada lataliyaha waxay wadaageen faahfaahinta mashruuca, kaas oo ay dadku siweyn u sugayeen ilaa iyo markaas.
Isaga oo ka hadlaya kulanka hordhaca ah ee ay ka soo qeyb galeen badhasaabyada degmada, qolalka xirfadleyda ah iyo ururada aan dowliga aheyn iyo sidoo kale wariyeyaal aad u badan, Duqa Magaalada Mersin Metropolitan Duqa Vahap Seçer wuxuu yiri, “Maanta waa maalin muhiim u ah anaga iyo Mersin. Markaad eegto maalgashiga, waxaan qabnaa maalin taariikhi ah. Waxaan qabaneynaa kulanka macluumaadka kaliya maahee Mersin kaliya laakiin sidoo kale mashruuca ugu muhiimsan uguna qiimaha badan gobolkayaga. ”
“Mashruuc dib u dhac ku yimid Mersin”
Isagoo ku nuuxnuuxsaday in nidaamka tareenka uu yahay nooc gaadiid hore oo adduunka ah isla markaana aan lahayn sumcad, metropolis, magaalo sumad leh iyo magaalo aan lahayn nidaamka tareenka adduunka, Madaxweyne Seçer wuxuu caddeeyay in Istanbul ay kula kulantay metro 32 sano ka hor, Konya, Eskişehir, Gaziantep, oo ah kan horrey u ah Mersin, Wuxuu xusay in nidaamyada tareenka ay dhowaan lagu rakibay gobollada. Madaxweyne Seçer wuxuu sii waday sida soo socota:
Waxaan u aragnaa inay tahay daahitaan mashruuc. Mersin waa magaalo leh uruuris taariikhi ah oo dhaqan iyo dhaqaale aad u muhiim ah. Eeg, ururintan ayaa qarxin doonta maalin uun. Waxaan heysanaa keyd aad u muhiim ah. Warshadaha, beeraha, dalxiiska, saadka, kartida cajiibka ah. Waxaan aragnay mar kale kentiyiz ah markii ugu horeysay hab aad u wada socda aynu eegno map saboolnimada Turkiga. Horumarkeenna waa inuu ahaadaa mid cad. Waxaan u baahanahay inaan qorsheyno 50ka sano ee soo socota. Waxa aad ugu yeerto tareenka dhulka hoostiisa maanta ma ahan mashruuc berri dhaca. Waxaan ka hadlaynaa qarnigii 18-aad, 200 sano ka hor. Waxay wali shaqeyneysaa maanta. Ilaa iyo hada waxay ku egtahay Berlin, Moscow, Paris, London maxaa yeelay waxay qiimo ku leedahay magaalada. ”
“Kororka dadka wuxuu muujinayaa in mashruucu yahay mid lama huraan ah”
Isagoo tilmaamay in dadka Mersin ay si xawli ah u korayaan isla markaana reer Siiriya lagu kordhiyay korodhkan, Duqa magaalada Seçer wuxuu yidhi, “Sanadkii 2015kii, waxaa ku noolaa 1 milyan 710 kun. Waxay noqotay 2019 milyan 1 kun sanadka 814. Laakiin wixii ka dambeeya 2013, waxaa jira koror aan ula kac ahayn oo ah 20 boqolkiiba. Waxaa jira ku dhawaad ​​350 kun oo reer Suuriya ah. Dadkeenna magaalada ayaa heli kari waayey dammaanad khasnad in muddo ah. Sababta oo ah dadweynaha ku nool bartamaha magaalada ma aysan gaarsiin heerkii la rabay. Laakiin maanta, rubuc ka mid ah dadkayagu waa tiro soogalootinimo, marti iyo qaxooti halkan ku nool. Marka nidaamkan tareenka ma ahan maalgashi aan loo baahnayn. Kordhintan waxay muujineysaa in sanadahaan shaqada aysan aheyn mid aan sal laheyn, xitaa kororka dadka ee xad dhaafka ah ayaa ka dhigaya shaqada mid sax ah isla markaana meesha ka saareysa walwal. Sidaa darteed, waxaan sii wadi doonnaa inaan shaqadan ku qabno si kalsooni leh.
Khadka East-West waa la soo gaabiyey, khadka waqooyi-koonfur ayaa lagu daray, qiimaha waa isku mid ”
Isagoo xusuusinaya in mashruuca metro-ka ee la qabtay xilligiisii ​​hore uu saadaalinayay xarriiqa 18.7 kiiloomitir inta u dhaxaysa Aagga Mezitli-Free, ayuu Madaxweynaha Seçer xusay in taabashada ay ku sameeyeen mashruucan, ay qadka hoos u dhigeen illaa 13.5 kilomitir. Seer wuxuu yidhi, “Waxaa jira walaacyo qaar. 'Mashruuca la ansixiyay iyo mashruuca iibinta ayaa kala duwan.' Laakiin maahan. Isku darka qarashku waa muhiim halkaas. Wadarta qiimaha ayaa hoos u dhacaya, wax dhibaato ahna kuma jiraan. Mashruucii hore, qadka wuxuu ka bilaaway Soli, waxaan ka bilaabeynaa hoolka hore ee dhismaha Dowlada Hoose ee Mezitli. Mashruucii hore wuxuu ku soo gabagaboobay aagga xorta ah, waana soo gaabinay. Waxay ku dhamaan doontaa saldhigga baska ee hore. Waxaa jiri doona hoolka magaalada, ”ayuu yiri.
Isagoo sheegay in ay iskuxiran doonaan khadka 13.5-kilomitir ee Galbeedka-galbeed iyo sidoo kale khadka tareenka fudud oo loo maro Isbitaalka Magaalada iyo khadka tareenka ee loo maro Jaamacadda Mersin, Madaxweynaha Seçer wuxuu yiri, “Markaa waxaas oo dhan waxay la mid yihiin qarashka nidaamka tareenka dhulka hoostiisa mara ee 18.7km aan ka helnay dhabtayada. . Waxay socotaa ilaa 30.1 km. Nidaamka isku dhafka ah laakiin qarashku waa isku mid. Sidaa darteed, maadaama kharashkeenu uusan iska beddelin barnaamijkeenna maal-gashiga, maalgashiga aan ku sameyn doonno meesha ugu horreysa ma lahan wax dhibaato sharci ah ”.
"Nidaamka tareenka ayaa sidoo kale soo noolayn doona suuqa"
Madaxweyne Seçer wuxuu tilmaamay in nidaamka tareenka uu taaban doono meelaha dhaqdhaqaaqa aadanaha sida Mezitli, jaamacad, isbitaal jaamacadeed, Marina, Forum Mersin iyo Çamlıbel ay aad u kulul yihiin wuxuuna yiri, “Dukaammada Çamlıbel dukaamadooda ayay si sax ah u xidhaan. Badeecadii ayaa dhammaatay, Mersin wuu dhammaaday. Mersin xarun ma leh. Aad ayey muhiim u tahay. Kani maahan mashruuc gaadiid oo isaga ah. Mashruuca bulshada iyo dhaqanka. Beerta Özgür Çocuk Park waxay leedahay xarun halkaas ku taal. Saldhigga Tareenka ayaa xarun ku leh halkaas. Waxaan isla galnay Çamlıbel. Haddii walaal ka yimid Mezitli iyo hooyaday rabaan inay u yimaadaan Çamlıbel oo ay wax ka iibsadaan, waxay imaan doontaa 10 daqiiqo, laakiin hadda ma awoodo. Xitaa haddii uu yahay gaas khaas ah, waa cibaado, haddii uu ku soo dego mid ka mid ah gaadiidka dadweynaha, waa dhaqan u gooni ah. Gawaarida deg-degga ah, dhakhso badan, raaxada leh, gaadiidka dadweynaha oo la isku halleyn karo ayaa si fudud ugu imaan kara metro. Waxaan ku darnaa "Çamlıbel" is dhexgalkaan. "
“50 boqolkiiba qiimaha qandaraaska ayaa kusii nagaan doona Mersin”
Isagoo ku nuuxnuuxsanaya inay u dalbanayeen 27ka Diseembar 2019 nidaamka nidaamka tareenka, ayuu yidhi Madaxweynaha Seçer:
Dhismahaani wuxuu ina siin doonaa dhaqdhaqaaq aad u weyn. Kaliya wejiga koowaad, waxaa jira 4 kun oo shaqooyin toos ah ah. Intaa waxaa u dheer, kuwa ugu toosan 4 kun oo qof ayaa ka faa'iideysta. Ma dhihi karno wadarta qiimaha hindisada maadaam ay sii soconayso, laakiin 50 boqolkiiba wadarta qiimaha qandaraaska ayaa kusii nagaan doona magaalada. Mushaharka shaqaalaha, mushaarka la siinayo, warshadaha-hoosaadka, alaabada looga baahan yahay dhismahan waxaa laga iibsan doonaa Mersin. Kuwaani waa tirooyin aad u tiro badan. 3,5 sano muddada dhismaha. Waxaa jira ikhtiyaar dheeraad ah oo 6 bilood ah. Nolosha dhaqaale ayaa su’aal laga qabaa geedi socodkan. 8 kun oo qof, oo toos ama si aan toos ahaynba, ayaa fursad u heli doona inay ka faa'iideystaan. ”
“Baahida sare ee qandaraaska”
Dooro mid curdan Pre-isreebreebka waxaa la qaban doonaa February 27, Madaxweynuhu xusuusiyay, Turkey ayaa in 18-kii bilood ee la soo dhaafay ku saabsan baaxadda this, oo soo dhaansatay: in mid curdan ah oo ka dhigay in this sal sharci dareenka. Seer wuxuu yidhi, Sababtaas awgeed, aad bay muhiim u tahay. Currently suuqa this ma aha oo kaliya in Turkey, Mersin dunida hadlayay. Kumaan imaanin bilooyinkii ugu dambeeyay? hay'adaha ugu ixtiraamo Turkiga, ee madaxda sare, ayaa cadeeyay shirkadaha Xaalkiinna ay, bangiyada gudaha iyo dibadda. Hay'ado badan oo maaliyadeed iyo shirkado dhisme, oo ka socda Isbaanish, Luxembourgers, Shiinaha, Jarmalka, Faransiiska, ayaa booqda gobolkayaga. Waxay danaynayaan arrintan. Waxaan nahay labada-markii ugu horeysay oo maaliyadda ku saabsan baaxadda this dalka Turkiga ilaa maanta waxaan ognahay mashruuc la wada curdan tahay dhismaha ah. Waxaa jira baahi weyn. Ha 'shuruudo gaar ah ee Turkey, waxaa jira foosha suuqa. Ha dhihin 'madaxweynaha wuxuu ku jiraa adduun riyo. Maya maahan. Waxaa jira lacag aad u badan adduunka, lacag aad u daran. Waxay raadinayaan dekedo amaan ah oo ay aadaan. Waxaa jira baahi weyn oo loo qabo mashruucan. Aad ayaan u hammi qabaa. Waxaan shaqadan siin doonaa tikniyoolajiyaddii ugu dambeysay, shirkado aad u qiimo badan oo aad loo ixtiraamo iyada oo ay jiraan xaalado aad u wanaagsan. Waxaan ku dhufan doonnaa pickaxe ugu horreeyay sannadka 2020 iyada oo aan wax shaki ah jirin. Waxaan tan u arkaa mid si cad u muuqda, shaki la’aan, oo runtii waxaan aaminsanahay mashruuca. Waxaan ka dambeeyaa mashruuca oo aan si adag u xajistaa anigana waan dalbanayaa. Waxaan ku sameyn doonnaa tan waqtigii loogu talagalay. Wax badan ayay ku soo kordhin doontaa Mersin. Ka baxsan kaliya safarka raaxada leh ee rakaabka, waxaan ku soo kordhin doonaa qiimo badan Mersin. Tanina waa raadkeenna. ”
Waxaan u malaynayaa 15 shirkadood oo hamiga leh inay si adag ula dagaalami doonaan qandaraaskan "
Madaxweyne Seçer ayaa uga mahadceliyay Madaxweyne Recep Tayyip Erdoğan mashruucan lagu soo daray barnaamijka maalgashiga 2019. Isagoo ku nuuxnuuxsaday inay isku dayi doonaan inay siiyaan mashruuca dammaanad maaliyadeed oo ka timaada dowladda dhexe, ayuu yiri Madaxweyne Seçer, “Tani waxay keenaysaa; waxay daaha ka qaadaysaa dhaqsaha iyo fursadaha dhaqaale ee la awoodi karo. Dhanka kale, ma ahan dhamaadka adduunka. Maanaan dhigin shuruudaha dammaanad-qaadka Maaliyadda ee qandaraasleyda. Ma aanan dhihin waxaan dammaanad ka qaadi doonnaa khasnadda, marka la fiiriyo shuruudaha hadda jira, in kabadan 40 shirkadood ayaa hadda ka soo degsaday faylkaan EKAP. Aniga waxay ila tahay in 15 shirkadood oo hamiga leh ay si adag ula dagaalami doonaan qandaraaskan. Mashruucu wuxuu khuseeyaa dhammaan Mersin, dhammaanteen, dhammaan jilayaasha. Waa mashruuc ay tahay in qof walbaa aqbalo, laga bilaabo maamulayaasha qiimaha leh, madaxweynayaashayada, gudoomiyaasha aqalada, wakiillada ururada aan dowliga aheyn, wakiillada xisbiyada siyaasadeed ilaa xafiisyada shaqaalaha, dadka reer Mersin iyo xubno saxaafadeed oo qiimo badan. Mashruucan waa mid muuqda. Uma qaadno si macquul ah 'waan sameynay'. Haddii ay jiraan khaladaad ama la tirtiray, annaga ayay na saaran tahay inaan saxno. Waxaan raadineynaa inaan helno kuwa kaamil ah, inaan runta sameyno, oo aannan qofna ka farxin. Waxaan rabnaa inaan ka farxino Mersin, dadka reer Mersin oo aan qiimo ugu darno Mersin. ”
“Waad arki doontaa in walwalku aanu sal lahayn”
Kulankii horudhaca ahaa ee mashruuca, Maareeyaha Qeybta Wadooyinka ee Magaalada Mersin Salih Yılmaz iyo wakiilo ka socda shirkada la talinta ee diyaariyey mashruucu wuxuu siiyay warbixin ku saabsan faahfaahinta farsamo ee mashruuca. Kulankaas, wakiilo ka socda ururada aan dawliga ahayn, saxafiyiinta iyo hogaamiyaasha fikrada ayaa sidoo kale fursad u helay in ay wax ka waydiiyaan mashruuca oo ay jawaab uga helaan su'aalahooda.
Duqa magaalada Seçer, oo mar kale yimid garoonka kadib markii ay su’aalaha ka jawaabeen shaqaalaha farsamada ayaa yidhi, “Waxaa jira walaacyo. Anigu waxaan oggolahay. Taasi waa sababta aan ugu baahanahay inaan faahfaahin ka eegno. Tan iyo markii aan u nimid maamulka, waxaan yeelanay kulankeenii soddon-tobnaad ee ku saabsanaa dhulka hoostiisa. Waxba kama samaynno habaar. Haddaba ha ka cabsanina. Waxaan ku gaari karnaa tan. Welwelku waa macquul, laakiin waxaad ogaan doontaa inay meesha ka baxday. Waxaan rajeyneynaa inaan shirarka badan isugu imaan doonno jilayaasha magaalada. ”
Immisa rakaab ah ayaa qaadi doona MERSINI RAIL SYSTEM?
* Jidka koowaad ee nidaamka tareenka Mersin wuxuu raaci doonaa jihada Mezitli-Marina-Tulumba-Gar.
* Sanadka 2030, tirada rakaabka gaadiidka dadweynaha maalin walba waxay gaarayaan 1 milyan 200 kun oo qof. Bartilmaameedka ayaa ah inuu qaado boqolkiiba 70 tan oo leh nidaam tareen.
* Tirada rakaabka maalinlaha ah ee Mezitli-Gar (West) ayaa la saadaalinayaa inay gaarayaan 206 kun 341. Tirada rakaabka saacadiiba waxaa lagu qiyaasay 29 kun 69.
* 62 kun 263 oo ka mid ah waxay rakaab ku noqon doonaan wadada Jaamacadda-Gar, 161 kun 557 waxay rakaab ku noqon doonaan wadada Jaamacadda-Hal.
* Waxaa jiri doona 67 63 rakaab ah maalin kasta marinka Gar-Huzurkent, iyo 92 kun 32 rakaab ah maalin walba inta u dhexeysa Gar-OSB.
* Tirada rakaabka maalin walba waxay noqon doonaan 81 121 qof inta u dhaxeysa Isbitaalka Gar-Otogar-Şehir, iyo 80 kun 284 qof inta udhaxeysa xarunta basaska Gar-Şehir.
* Khadka Mezitli-Gar, waxaa jiri doona 7930 mitir oo goyn-gooyn iyo 4880 mitir oo ah tuneel keliya.
* Waxaa jiri doona baabuur dhigashada 6 oo gawaarida ah 1800 saldhig iyo baarkin baaskiil iyo baarkinnada mootada dhammaanba saldhigyada.
WAA MAXAY FARSAMADA FARSAMADA EE MERSINI RAIL SYSTEM?
Dhererka xariiqda Mezitli ilaa Gar: 13.40 km
Tirada Rabshadaha: 11
Maqaarka iskutallaabta: 5
Khad Degdeg ah: 11
Nooca tunnel: tuubada kelida ah (9.20 mitir dhexroor gudaha ah) iyo qeyb furan
Xawaaraha ugu badan ee hawlgalka: 80 km / saac Xawaaraha hawlgalka: 42 km / saac
Hal jid waqti safar: 23 daqiiqo
Dhererka khadka tareenka ee fudud ee u dhexeeya Eski Otogar-Şehir Hastanesi iyo Saldhigga Baska: 8 kun 891 mitir
Tirada Rabshadaha: 6
Khadka Tram ee u dhexeeya Fair Center iyo Jaamacadda Mersin: 7 kun iyo 247 mitir
Tirada Rabshadaha: 10
Faahfaahinta mashruuca Mersin Metro
Wadada tareenka fudud ee Mersin City Hospital
Shirka Macluumaadka Nidaamka Raadinta Mersin Tareenka
Nidaamka xadiidka Mersin